Gazety sy haino aman-jery sy ny coronavirus - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny fivoaran’ny ady atao amin’ny ‘covid-19’ sy ny haino aman-jery
Tsiahivina fa hatramin’ny nanaovana ny firenena ho « Etat d’urgence sanitaire » tamin’ny 21 marsa, dia miainga ao amin’ny « Centre de Commandement Opérationnel Covid-19 » (CCO) eny Ivato ny vaovao ofisialy momba ny fivoaran’ny ady atao amin’ity areti-mandoza « coronavirus covid-19 » ity, ary mpitondra teny amin’izany ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle. Halefa isan’andro amin’ny RNM sy ny TVM ny vaovao isaky ny amin’ny 1 ora ary misy ihany koa ny tafa ataon’ny filohan’ny Repoblika Andry Rajoelina isan’alina amin’ny 8 ora, ary tsy maintsy halefan’ny haino aman-jery rehetra izay voalaza fa « réquisition d’office ».
Raha 3 no niaingan’ny isan’olona mitondra ny tsimok’aretina tamin’ny 20 marsa, dia 54 izany tamin’ny antoandron’ny 1 aprily 2020, araka ny fampitam-baovao avy eny amin’ny CCO. Nanaovana antso tamin’ny haino aman-jery ireo rehetra nandeha tamin’ny sidina avy any ivelany andro vitsivitsy talohan’ny 19 marsa nanapahan’ny fitondram-panjakana hevitra fa hanidiana ny sisin-tany, mba hanaovana ny fitiliana azy ireo.
Fepetra maro no noraisin’ny fitondram-panjakana iatrehana ny ady toy ny fihibohana na « confinement » ho an’ny Faritra Analamanga sy ny any Toamasina voalohany sy faharoa izay nahitana ny trangan’ny soritr’aretina, sy ny fampiatoana ny fivezivezen’ny fiara fitateram-bahoaka manerana ny Nosy. Eo koa ny fampiharana « couvre-feu » na tsy fahazoa-mivezivezy amin’ny alina manomboka amin’ny 8 ora alina ka hatramin’ny 5 ora maraina. Nilaza ny filoham-pirenena Andry Rajoelina fa homena fanampiana ny sokajin’olona toy ny zokiolona, ny mpanasa lamba, ny mpamily taksibe sy ny mpanampy azy, ny mpamily taksi, ny mpivarotra amoron-dalana ary hatramin’ny mpivaro-tena aza. Voatonony mihitsy tamin’izay ny fanomezana 100 000 Ariary, saingy tsy araka izany ilay izy fa vary sy menaka ary « sardine » tombanana ho manodidina ny 50 000 Ariary ho an’izay nahazo. Teo ihany koa ny filazany ny hanaovana ny tsena mora amin’ny fivarotana vary sy menaka. Ny tsikaritra dia nisavoritaka ny fizarana ny fanampiana ary maro ireo sokajin’olona tokony hahazo kanefa tsy nahazo. Nikorontana ny famatsiana ny vary sy menaka mora tanivon’ny fokontany izay filaharana vao maraina no hita, ary tsy dia nahazon’ny olona fahafaham-po.
Mandringa sy mifamahofaho ihany, araka izany, ny fampiharana ny fepetra toy ny fihibohana raha ny zava-misy ka tsy maintsy ivohan’ny olona maro ny trano noho ny fivelomana. Tsy voahaja ny elanelana 1 metatra amin’ny olona voatery mivezivezy noho ny fividianana izay ilaina any an-tsena. Ny 28 marsa, ohatra, dia nisy hetsiky ny mpitarika posy tany Toamasina izay mitaraina amin’ny fananana hanin-ko hanina, araka ny fampitam-baovaon’ny haino aman-jery samihafa sy tamin’ny tambajotra sosialy. Ny gazety an-tsoratra moa dia efa tsy mivoaka ny ankamaroany fa any amin’ny internety no hamoahan’izy ireo ny vaovao. Fa na ny famoaham-baovao aza, dia manahirana ihany koa satria misy fanohintohinana ny fahafaha-maneho hevitra raha ny fanamarihana nataon’ny RSF (Reporters sans Frontières) izay nanakiana ny fanaovan’ny manam-pahefana ramatahora ny mpanao gazety aty Afrika. Momba an’i Madagasikara dia notenenin-dry zareo ny fampiatoana ny serasera amin’ny mpihaino maneho hevitra an-telefaonina. Tamin’ny 28 marsa aza dia novakian’ny minisitry ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy tao amin’ny RNM sy TVM ary ny haino aman-jery samihafa ny anaran’ireo fahitalavitra sy radio tsy mety manaraka ny fanaovana « miara-manonja » ka nandefasany fampitandremana « mise en demeure » 24 ora, anisan’ireny ny Real TV sy Real Radio. Narangarangany fa « réquisition d’office » ny haino aman-jery rehetra amin’izao « Etat d’urgence » izao ka azo saziana izay tsy manaraka izany, na manapatapaka ny vaovao ampitaina. Ny tsikaritra aloha dia saika miompana amin’ny ady amin’ny « coronavirus » avokoa ny fandaharan’ny haino aman-jery rehetra, manome toromarika ara-pahasalamana toy ny fanasana tanana matetika amin’ny savony. Vaovao iray nampitain’ny haino aman-jerim-panjakana ihany koa ny momba ilay vehivavy namoaka tsaho tamin’ny FB, nilaza fa efa 200 ny matin’ny « coronavirus » eto amintsika, ka namoahana antso fikarohana sy fanambazana vola 5 tapitrisa ariary ho an’izay mahita azy.
Anisan’ny manana ny anjara toerany eto amin’ny firenena ny vavaka atao iatrehana ny ady amin’ny areti-mandoza coronavirus. Ny Alahady 29 marsa dia nisy ny fotoam-pivavahana ekiomenika notarihin’ireo filoham-piangonana efa-tonta ao amin’ny FFKM, nalefa mivantana tamin’ny fahitalavitra sy radio IBC, avy ao amin’ny EEM Ambohimanoro toy ny efa natao ny Alahady talohan’io tao amin’ny Katedraly Andohalo.
Manaitra amin’ny mety hisian’ny fanararaotana ny ‘Transparency International’ miady amin’ny kolikoly-sampana Madagasikara. Nanao fanambarana izy tamin’ny 27 marsa 2020 izay nampitaina tamin’ny haino aman-jery maro, manamarika fa ny maha ao anatin’ny hamehana ny firenena dia tsy tokony hanaovana ambanin-javatra ny fampiharana ny mangarahara amin’ny fanapahan-kevitra raisina, ny tsenam-barom-panjakana manaraka ny ara-dalàna, ary ny fiarovana ny fahafaha-maneho hevitra sy ny fahafaha-mampita vaovao.
Taty amin’ny herinandro faharoa amin’ny fihibohana, dia nahatsapa ny tsy firindrana eo amin’ny fitantanana ny tsena mora ny fitondram-panjakana ka nanitsy ny fomba fanatanterahana izany. Teo ihany koa ny fanamafisana ny fanarahana ny fihibohana ka nanaovana fisavana ireo mivezivezy eny an-dalambe izay tokony hazava ny antom-pivoahana.